Trader ၏ Sun EA သုံးသပ်ချက် - အကောင်းဆုံး Forex EA's | ကျွမ်းကျင်သောအကြံပေးပုဂ္ဂိုလ်များ FX စက်ရုပ်
သြဂုတ်လ 10, 2020
ပင်မစာမျက်နှာကုန်သည်၏ Sun EAကုန်သည်၏ Sun EA ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
အကောင်းဆုံး Forex EA'S | ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး | FX စက်ရုပ် ကုန်သည်၏ Sun EA 1
စျေးနှုန်း: $269 (1 LIFETIME LICENSE, FREE UPDATES & 24/7 FRIENDLY SUPPORT)
ငွေကြေးစွမ်း: EURUSD, USDJPY
မှတ်စု:3တွင် FXTraderKit E ၏ကွဲပြားသောအထုပ်များရှိသည်အခု xpert Advisor ရနိုင်သည်
- အထူးကမ်းလှမ်းမှု - 1 License of Trader's Sun & Trader's Moon EA's, Free Updates & Support, လျှော့စျေး: $ 405
ဤဖြည့်စွက်ထားသော Forex စက်ရုပ်အကြောင်းပိုမိုသိရှိလိုပါကကျွန်ုပ်တို့၏ဖတ်ပါ Trader's Moon EA review
Trader's Sun EA Review – Profitable Forex Expert Advisor For Metatrader 4
ကုန်သည်၏ Sun EA အလွန်အစွမ်းထက်နှင့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ဖြစ်ပါသည် FX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အရင်ကဆိုရင်နှင့်အပြစ်တွေနှစ်ဦးစလုံးသည်။ ဒီ developer များ Forex စက်ရုပ် ဒီကုန်သွယ် algorithm ကိုဖန်တီးနိုင်စေဖို့, နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားလုပ်ဆောင်နေခဲ့ကြသည်။
ယခုကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်စျေးကွက်တွင်အလိုအလျောက်အရောင်းအ ၀ ယ်ပြုလုပ်သောအကောင်းဆုံးအဖြေတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြတ်အမြတ်များများရရှိရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်အမြတ်အစွန်းမြင့်မားစွာဖြင့်အမြတ်အစွန်းများကိုပုံမှန်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန်သို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းကိုအခြားကုန်သွယ်မှုအကောင့်သို့ပြောင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
ကုန်သည်၏ Sun EA သင့်ရဲ့ Metatrader4(MT4) ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းနေရာ, မန်နေဂျင်းနှင့်ပိတ်ပွဲအရောင်းအပေါ်အပြေး, အာရုံကြောကွန်ရက်များနှင့်နက်ရှိုင်းသောသင်ယူမှုထည့်သွင်း။ အဆိုပါ developer များဟာတည်ဆောက်ရန်အများအပြားဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းကုန်သွယ်ညွှန်းကိန်းများနှင့် filter များလျှောက်ထား ကုန်သည်၏ Sun EA လည်းအများဆုံးရလဒ်အဘို့, ဈေးကွက်ထဲမှာဖွင့်ဖို့ကြိုတင်ဆော့ဖ်ဝဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။
အဆိုပါ FX စက်ရုပ်အပေါ်အလွန်မြင့်အနိုင်ရခဲ့မှုနှုန်းရှိပါတယ် EURUSD နှင့် USDJPY တစ်ချိန်တည်းမှာအားလုံး။
ဒါကထူးခြားတဲ့ ကုန်သည်၏ Sun EA သင်အောင်မြင်မြင်ချင်သူကိုကုန်သည်တွေအနေနဲ့ကျွမ်းကျင်သူအဖွဲ့ကတီထွင်ခဲ့သည်!
၏အသုံးပြုမှုကို Make ကုန်သည်၏ Sun EA နှင့်ရွှေသို့သင်တို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဖွင့်!
မည်သည့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါဘဲလွယ်ကူသောပိုက်ဆံဘာသည် ကုန်သည်၏ Sun EA အားလုံးအကြောင်းပါ။ ဒါဟာသင်ပြန်ထိုင်အနားယူနှင့်ရိုးရိုးလေး FX ထရေးဒင်းစက်ရုပ်ဟာသူ့ရဲ့လှည့်ကွက်ပြုပါစောင့်ကြည့်ဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ automated Forex မဟာဗျူဟာနှင့်ပရိုဂရမ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာစနစ်ဖြစ်ပါသည်။ အ parameters တွေကို, အကြေးခွံနှင့်သင်တို့၏ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာ၏ကန့်သတ်သင်တို့အနားမှာထောက်ပံ့ခဲ့ကြပြီးနောက်, စက်ရုပ်ကျော်ကြာမြင့်ခြင်းနှင့်သင်တို့အဘို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာအပေါငျးတို့သကိုင်တွယ်။ ဒီအဖြစ်ကိုကောင်းစွာအခြားအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်များပေါ်တွင်သင်၏စွမ်းအင်အာရုံစိုက်နေချိန်တွင်ထိန်းချုပ်မှုယူရန်သင့်အားခွင့်ပြုထားသည်။
ကျွန်တော်တို့ကိုလူသားတွေအတွက်အမတူဘဲ ကုန်သည်၏ Sun EA စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမတည်ငြိမ်မှုများကင်းမဲ့ပြီးလုံးဝတွက်ချက်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး spur-of-the- ယခုအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်ချက်မယူပါလိမ့်မယ်။
Trader's Sun EA – About Trading Logic, Setup And Other Requirements
ကုန်သည်၏ Sun Forex စက်ရုပ် Metatrader4(MT4) ပလက်ဖောင်းအတွက်အပြည့်အ ၀ အလိုအလျောက်ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ algorithm ဖြစ်သည်။ algorithm တွင်ပါ ၀ င်သောဤကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏မဟာဗျူဟာသည်စျေးကွက်၏လှုပ်ရှားမှု၏အပြုအမူနှင့် ဦး တည်ချက်ကိုဖော်ထုတ်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုခြင်းနှင့်ခုခံနိုင်မှုအဆင့်များကိုဆုံးဖြတ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်မှု၏စွမ်းအားနှင့်၎င်း၏ဆက်လက်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ။
အဆိုပါ FX စက်ရုပ်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ် EURUSD နှင့် USDJPY ငွေကြေးအတွဲ။ အဆင့်ဆင့်မှကုန်သွယ်ရှင်းလင်းစွာတရားဝင်နှင့်အခြေခံအချက်များအားဖြင့်ထောက်ခံသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်အမြတ်အစွန်း / အရှုံးပေါ်စေသောငွေပေးငွေယူသည် 38-33 အချက်များဖြစ်ပြီးပျမ်းမျှငွေပေးချေမှုကြာချိန်မှာ 200 မိနစ်ဖြစ်သည်။ EA တွင်ကောင်းမွန်သောငွေစီမံခန့်ခွဲမှုရှိသည်။
ကျနော်တို့အလွန်အမင်းယင်းနှင့်အတူကုန်သွယ်မှုအကြံပြု safe mode 50% အန္တရာယ်ကိုအသုံးပြုခြင်း (သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော) ။ ၎င်းသည် 200 အတွက်ဒေါ်လာ 0.01 လိုအပ်သည်။
နှင့်အတူကုန်သွယ်၏အမှု၌ ပျမ်းမျှ mode ကို အကြံပြုထားသည့်အန္တရာယ်မှာ 35% (သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် 100 အတွက် $ 0.01 လိုအပ်သည်။
နှင့်ကုန်သွယ် ရန်လို mode ကို သင်သည် 25% အန္တရာယ် (သို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းသော) ကိုသတ်မှတ်သင့်သည်။ 50 အတွက်ဒေါ်လာ 0.01 သာလိုအပ်သည်။
သငျသညျကို default အဖြစ်စောင့်ရှောက်သင့်သည်အခြား parameters တွေကို။
ကုန်သည်၏ Sun ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး အားလုံး Metatrader4(MT4) ပွဲစားများနှင့်အတူအဖြစ် ECN-type အမျိုးအစားအလို့ငှာပွညျ့စုံသုံးပြီးပွဲစားနှင့်သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်။
ပေါ်လစီပြန်အမ်း: အဆိုပါရောင်းချသူ 30 ရက်အတွင်းအပြည့်အဝပိုက်ဆံပြန်အာမခံချက်ပေးပါသည်။ အကယ်. ကုန်သည်၏ Sun Forex စက်ရုပ် didn't madeaprofit till the end of 30 days period, the vendor will back your money. Also ifadrawdown in the balance of your account is more than 35%,arefund will be initiated, on condition that you use recommended settings.
ကုန်သည်၏ Sun EA မယုံနိုင်စရာစျေးနှုန်း, ဆိုလိုသည်မှာသာ $ 269 မှာချက်ချင်းမရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့မိတ္တူဖမ်းပြီးမှမစောင့်ကြဘူး!
Forex ဦးနှောက်ကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော Profits တွေ EA ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ရန်လို mode ကို
ပျမ်းမျှ Mode ကို
safe Mode ကို
အထူး FXTraderKit ကမ်းလှမ်းချက်
ကုန်သည်၏ Sun ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး
ကုန်သည်၏ Sun Forex စက်ရုပ်
ကုန်သည်၏ Sun ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့အောက်တိုဘာလ 2019
ကုန်သည်များ၏နေရောင်ခြည် - METATRADER4(MT4) စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့် FOREX ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေး၏စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်မှု - + 2.8% လတစ်ကြိမ်ပြန်လည်ရရှိခြင်း (အမှန်တကယ်ငွေစာရင်း!) ချစ်ခင်ရပါသော Forex ကုန်သည်၊ သတင်းများ! Trader ၏ Sun EA သုံးသပ်ချက် - Metatrader4အတွက်အမြတ်အစွန်းဆိုင်ရာ Forex ကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးအဖွဲ့ဤနေရာတွင်ပိုမိုသိရှိလိုပါက https://www.bestforexeas.com/traders-sun-ea-review/ အချက်အလက်များနှင့်ဆုကြေးငွေများရယူပါ။ Trader Sun EA သည်အလွန်အစွမ်းထက်။ အပြည့်အဝအလိုအလျောက် FX ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည်။ အစပြုသူများနှင့်အကောင်းအဆိုးနှစ်ခုလုံးအတွက်အကြံပေး။ ဤ Forex Robot ကိုတီထွင်သူများသည်ဤကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ algorithm ကိုဖန်တီးရန်နှစ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားခဲ့ကြရသည်။ ယခုကျွမ်းကျင်သူအကြံပေးသည်စျေးကွက်တွင်အကောင်းဆုံးအလိုအလျောက်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးအမြတ်အစွန်းများစွာရရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။... ဆက္ဖတ္ရန္